: at 12/20/2009 01:22:00 AM
တနေ့ တာ....ဒီက စ, တယ် ....လန် သွား ၊၊ အဲ .. လန့် သွားကြပြီလား ။
ညကလည်း ထုံးစံအတိုင်း အတော်မိုးချုပ်မှ အိပ်ဖြစ်တယ် ၊ သိတယ်ဟုတ် ဘလောဂ့် တကာအလည်ကောင်းနေတာနဲ့။ ဒီတော့ လည်း အိပ်လိုက်တာ ကမ္ဘာကြီး ကို တင်ပါးစောင်းပေါ် တင်ပြီးတော့ပေါ့ ၊ ( လောကကြီးကို ခါးစောင်းတင်တဲ့ လူစား မျိုး မဟုတ် ပါ )
ကလင် ကလင် ကလင် ....ဪ ဒီ နာရီကလည်း မြည်လာပြီ ။ သွပ်ပြား အိပ်လို့ တောင်မဝသေးဘူး ။၆ နာရီပဲ ရှိသေးတယ်။ ပိတ်ပြီး ခဏ ဆက်နှပ်လိုက် အုံးမှ ပဲ ။
အယ် .. ခနလေးပဲ နှပ်ရသေးတယ် ။ ၇ နာရီ ထိုးသွားပြီတဲ့ ၊ မရဘူး ၊ ထ နိုင်သေးဘူး ။ နောက် ၁၀ မိနစ်လောက် ဆက်နှပ်လိ်ုက်အုံးမယ်ဟာ ... ( နောက်တကြိမ် ပြန်အိပ်မောကျသွား လေသည်)
ဟိုက် .. ဗုဒ္ဓေါ ။ သေပါပြီ ၇း၃၀ တောင်ရှိသွား ပါရောလား ။ဘယ်လို လုပ် ပြန်အိပ်ပျော်သွားမှန်း မသိလိုက်ဖူး ၊
ဒီနေ့ မနက်စောစော ဆီမီနာ ရှိသေးတယ် ။ ဘာမှတောင် လုပ်ရသေးဘူး ။ပြသနာ ပဲ ။
ကျန်းမာရေးကလည်း အရေးကြီးတယ် ။ အချိန်ကုန် သက်သာအောင်၊အလုပ်နှစ်ခု တပြိုင်တဲ လုပ်ရတယ် ။အရေးကြီးတဲ့ ကမ္ဘာ့အရေး ၊တိုင်းရေး ပြည်ရေး ၊ စီးပွားရေး နဲ့ အတင်းအဖျင်းတွေ ခေတ်နောက်မကျအောင်၊ မသိသူတွေကို ရွှီးလို့ ရအောင် ဖတ်ထား ဦးမှပဲ ။
အောင်နက်ကို ဈေးလွှတ်လိုက်တာ လည်း ခုထိပြန်မရောက်သေးဘူး ။ ဒုက္ခပါဘဲ ထမင်းဘူး မမှီတော့ဘူးပေါ့ ။တတ်နိုင်ပါဘူး ဒီနေ့ လည်း ဖြစ်သလိုပဲ စားရတော့မယ် ။ အလှ အရင် ပြင်ဦးမှ ပဲ ၊
ဒီပုံကြီးကို ဘယ်လို လှအောင်ပြင်ရပါ့ ။ နဂို ရှိမှ နဂိုင်းထွက်တာ တဲ့လေ ။ ခုတော့ မနဲ မနော ထွက်နေပြီ ။စိတ်ညစ်ပါ့ ။
အချိန်မရလို့မိတ်ကပ်ကို ဖြစ်သလိုပဲ လိမ်းလိုက်တယ် ။ သိမ်းထားတာ ကြာလို့အရောင် က မဲသွားတာ ၊ ရတယ် ၊ ကိစ္စ မရှိပါဘူး ။ နဂို က လှပြီးသားပဲ ။
ဒီနေ့ဘာဝတ်ရမလည်း ။ ရွေးဦးမှ ။ ဆီမီနာ မှာ ဆရာ ချောချောလေးက ပို့ စ် အသစ်တင် .. အဲလေ ရှားရှားပါးပါး ကေ့စ် တခု ဆွေးနွေးမှာဆိုတော့ ၊ သူကြည့်အောင် ဘယ်လို ဝတ်ရပါ့ ။ အင်း .. ဒီဟာလေး မဆိုးဘူး ။ လေကောင်းလေသန့် လည်း ရတာပေါ့လေ ။
ကဲ ဘယ်လိုလည်း ။ အဆင်ပြေတယ်ဟုတ် .. ..
အင်း မနက်စာ စားရအုံးမယ် ။ ဘာစားရင်ကောင်းမလည်း ။ အစားတလုပ် ရှာစားရတာလည်း အတော် ခက်ပါလား နော် ။
အချိန် မရတော့ တွေ့ ရာပဲ ကမန်း ကတန်း ပေါ့ ။ လာလေရော့ ။ တရုပ်ပြီး တရုပ် ... အဲလေ .. တလုပ်ပြီးတလုပ် ။
အင်း ၊ ဒီနေ့ဟမ်ဘာဂါ လေးက အရသာ တမူ ထူးနေသလို ၊ ပိုစားကောင်းသလို ပဲနော် ။ စားကောင်းကောင်းနဲ့ တခုလုံး ကုန်တာပဲ ။
ဪ... ဒီကလေး တကောင်ကလည်း ၊ ပြောမရ ဆိုမရ ၊ ဟိုဆွဲ ဒီဆွဲ နဲ့ ။ အဖေတူသား လေး ၊ တယ်လေ ။
အယ် . .. ညနေဖက် ရေ မလာဘူးတဲ့ ။ ပန်းကန်တွေ လည်း ဆေးရဦးမှာပေါ့ ။ ဒုက္ခပါဘဲ ၊ အချိန် မလောက်ရတဲ့ ကြားထဲ ။ဒီ ကလေးက တမျိုး ။ စိတ်ညစ်ရပါ့ ။ ဒီလိုလေး ခန နေဦး နော် ။
ငြိမ်ငြိမ် နေပါဆို ။ ဒီမှာ ပန်းကန်ဆေးရတာတောင် မဖြောင့်ဘူး ။ အရေးထဲမှ E . E ပါချပြန်ပြီလား ။ ကဲလေ ။ မထူးပါဘူး ။ တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် ။ တခါတည်း ဆေးကြော ပေးလိုက်မယ် ဟယ် ၊ ဘယ်သူမှ မတွေ့ဘူး ။
အလုပ်နောက်ကျတော့မယ် ။ဘတ်စ်ကား ကလည်း ဒီနေ့ မှ စောင့်ရတာ ကြာလိုက်တာ နော် ။( အနောက်က လူကြီးကလည်း နှောက်ယှက်နေသေးတယ် ) ။
တော်ပြီဟယ် ။ ဘတ်စ်ကား မစောင့်တော့ဘူး ။ စက်ဘီးလေးပဲ နင်းသွားတော့မယ် ။ အညောင်းလဲ ပြေတယ်လေ ။ ကားပိတ်တာ လဲ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ ။
(ဟို လူကြီး ၊ ကလူထွင်းလို မဖြစ်အောင် ပုလိပ်ရှောင် မောင်းရမယ် . ရှေ့ မီးရော နောက်မီးပါ မရှိလို့..)
စက်ဘီးနင်းရတာ ညောင်းလာပြီ ၊ ခေါ်သူရှိတုံး ၊ဒီလိုလေး ကားကြုံတက်စီးလိုက်မယ် ။ အဆင်ပြေချင်တော့လည်း ဒီလိုပဲလေ ။
အလုပ်ရောက်ပြီ ။ အချိန်တောင် နဲနဲ နောက်ကျသွားပြီ ၊ကမန်းကတန်း ပြေးရအုံးမယ်
ဟူး.. ရောက်ပါပြီ ဆီမီနာ ခန်းထဲ ။ မှောင်လို့ မဲမဲ ပါလား ။ အစီအစဉ် စနေပြီ ထင်ပါ့ ၊
ဆရာချောချော နဲ့ တွေ့ ရမယ်ထင်တာ ၊ မှန်းချက် နဲ့နှမ်းထွက် မကိုက်ပါလားလေ ။
ပြောတာတွေကလည်း စိတ်ဝင်စား စရာ မကောင်း ၊ ညတုံးကလည်း အိပ်ရေးမဝ နဲ့ ၊ ခိုးအိပ်တာပဲ ကောင်းပါတယ် ။တော်သေးတာပေါ့ ၊ နေရာယူ မှန်သွားပေလို့။ ဆီမီနာ ပြီးရင် နှိုးဖို့ မမေ့ နဲ့အုံး ၊သူငယ်ချင်း မောင်ဘဦးရေ ။
လက်ခုပ်သံကြားတော့မှ နိုးလာတယ် ။ ဝါးးးးးး ၊ ထမင်းစားချိန်တောင် ရောက်ပါရောလား ။စားနိုင်မှ အိပ်နိုင်မှာ၊ ဒီတော့...
အလကားရတာ အကုန်စားပဲ ၊ ဂျီးများနေရင် ငတ်မှာ ၊
များများစားလို့ ကောင်းအောင် နဲနဲ လုပ်ပြရတယ် ။( မောင် ညီမငယ်တို့အတုယူမမှားကြစေလို )။ဘာမှ မလုပ်ပဲ တော့ ရာထူး မတိုးနိုင်ပေဘူး လေ။ ( သူဌေး အလစ်မှာခိုးရိုက်ထားသောပုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ အလုပ် ကူလုပ်ပေးရင်း ၊ သူ့ နေရာမှာပါ... )
ဒီလိုနဲ့အလုပ်မှာ အိယောင်ဝါးခဲ့တာ ... အလုပ်ဆင်းချိန်ရောက်ပါပြီ ။ ဖြေးဖြေးဆေးဆေး ဆိုတော့ ကြုံသလို ပဲ ပြန်ပါတယ်။ ဓါတ်ဆီချွေတာရာလည်း ကျပါတယ် ။လေထု ညစ်ညမ်းမှုလည်း နည်းစေတယ် ။
အိမ်မပြန်ချင်သေးဘူး ။ ကျန်းမာရေးတွက် အားကစားလေး လုပ်အုံးမှ ....ဒီလို ဒီလိုလေး ပေါ့။
အိုးးးး ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် အပင်ပန်းခံနေရတာလည်းလို့ထင်နေရင် မှားမယ် ။ ဒီပုံကြီး ဖြစ်နေလို့ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် ဒီတသက် စွံဖွယ် မမြင်ပါလေ ။
ဒီလို ပိန်ပိန်ပါးပါး ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်းလေး ဖြစ်ချင်တော့လည်း ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ရပေအုံးမပေါ့ .....
တနေကုန် အလုပ်လုပ်နေရတော့ ဒီလိုလေးလည်း အညောင်းဖြေ ရသေးတယ် ။
အနှိပ်ခံရတာ အတော်လေး အညောင်းပြေသွားပြီ ။ အိမ်ပြန်အုံးမှ ပဲ ။ မပြန်ခင် ဆံပင် ဆက်တင် လုပ် ၊ ရှိုးထုတ်ဦးမှ ။ ဒီဇိုင်းဆင်တူလေး နဲ့ လှတယ်ဟုတ် ...
လှတ ပတ လေးလုပ်ပြီး တော့ အိမ်အပြန် ညနေစာ အတွက် လမ်းမှာ ဝင်ဝယ်ရသေးတယ် ။ ဘာဝယ်ရမှန်းမသိတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ ချက်လို့ ရတာ လေးပဲ ဝယ်ဖြစ်တယ် ။ ကြက် ၃ ကောင် ။
လွယ်လွယ်ကူကူ လေးပဲ ချက်စားပါတော့မယ် ။ ဒီလို လေး ခုတ်တယ် ထစ်တယ် ပါးပါးလှီးတယ်လေ ။ ဖြစ်သလိုပါပဲ ။အစားတလုပ် အတွက် ဒီလောက် ဒုက္ခ မခံချင်ဘူး ။
စားလို့ဝါးလို့ လည်း ပြီးပြီ ။ အချိန်တန်တော့ နပိန်ကန်ရအုံးပေမပေါ့ ။ ဘလောဂ် တကာ လည်ဖို့လေ ။ အယ် ၊ဒီကလေး နှစ်ယောက် နဲ့ညတိုင်း ကွန်ပူတာ ကြီးလုနေရတာ အလုပ်တခု ။ ဒါပေမဲ့ သိတယ်ဟုတ် ။ လူကြီးဆိုပြီး ပါဝါ ပြပြီး အနိုင်ယူ လိုက်တာပေါ့ ၊ ဘယ်သူ ဘာပြောမလည်း နော် ။
အရေးထဲမှ ဖုံးတွေ ကလည်း တဂွမ်ဂွမ် နဲ့ လေ ။ ဘလောဂ် လည်တာ အချိန်မလောက်ရတဲ့ ကြားထဲ ၊ ပြန်မပြော လို့ ကလည်း မကောင်း ။ လူမှုရေးတွေ လား ။ မဟုတ်ပါဘူး ။ အရည်မရ ၊ အဖတ်မရ တာတွေ ပါပဲ ။တော်ကီပွား ရတာလည်း ပင်ပန်းတာ ပဲ ။
ဒါနဲ့ ပဲ ဗိုက်ဆာ လာပြန်ပြီ ။ မအိပ်ခင် နွားနို့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ပူပူနွေးနွေးလေး သောက်ရမယ် ဆိုလို့ကိုယ်တိုင် မွေးပြီး ကိုယ်တိုင် ညှစ်ထားတဲ့နွားနို့ရှိတယ် ။ သောက်ကြ အုံးမလား ။
သန်းခေါင်ထက် နက်တဲ့ည ၊ ဒီလိုပုံ နဲ့မိုးကြီးလည်းချုပ်ပြီ ။ မပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့ မနက်ဖြန်များစွာ အတွက် အသက်ဆက်ဖို့အလုပ်လုပ်ရအုံးမှာမို့၊ အိပ်ချိန်တန်တော့လည်း အိပ်ရ ပြန်ပါပြီ ။ အနှောက် အယှက်ကင်းစွာနဲ့ဒီလို လေး အိပ်ရတာ လည်း လောက စည်းစိမ် တမျိုး ပါပဲလေ ။
ဒီလို နဲ့တနေ့ တာ များစွာ တွေ ကုန်ဆုံး နေခဲ့ ရပါတယ် ။
ပျော်စေလိုတဲ့ သဘောသက်သက် နဲ့ ရှာဖွေ တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ပုံများ အထဲ မှ တချို့ သော ပုံများမှာ မျက်စိ အမြင် ရိုင်းနေသလို ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ ။ နားမလည် လို့ပြောချင်တယ် ဆိုလည်း ပြောခဲ့နိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ခါးချိ နေတဲ့ဖွားကိ တယောက် ခုလောလောဆယ်မှာ ဘလောဂ်လည်ခြင်း ၊ကော်မန့် ရေးခြင်းများနဲ့ ခဏတာမျှ ခွဲခွာ နေရပါအုံးမယ် ။အိမ်သာနတ်ကြီး နဲ့ ထိတွေ့ ဖို့အခြေအနေ မပေးတဲ့နေရာ တခုမှာ ရှိနေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နောင် လာမဲ့ နှစ်သစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာမှ ၊ ချစ်ခင်ရသော မောင်နှမ မိတ်ဆွေ များ နဲ့ပြန်လည် တွေ့ ဆုံ နိုင်ပါမဲ့အကြောင်း အစီရင် ခံအပ်ပါတယ် ။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ဘွယ်ရာ နှစ်သစ်မှာ မိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့ကျန်းမာ ရွှင်လန်းပြီး အစစ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ ။ လိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့် ဝနိုင်ကြပါစေ လို့ကြို တင် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
( ပုံ များ ကို ဂူဂယ်အကူအညီ နဲ့ ရယူထားပါတယ် )
:kiki : at 12/20/2009 01:22:00 AM
မိုးခါး said... | Sunday, December 20, 2009 2:57:00 AM
မနိုင်ဘူး .. (ပုံထဲမှာက ၀နေတာကိုးးးးးးးးးးးး :P) :D
အလုပ်ပိနေတာပါ .. အဟဲ .. :D
Welcome said... | Sunday, December 20, 2009 3:01:00 AM
ဖွားကိပြန်လာမယ့် ၂၀၁၀ ထိ မချိမဆန့် မျှော်နေပါ၏ ..
thawzin said... | Sunday, December 20, 2009 3:34:00 AM
ပုံတွေက အဆန်းတွေကြီးပါပဲနော်။ ကျွန်တော်တို့လို့ အင်တာနက်ကြီး ပျက်သွားတလား။ သြော်စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။
Khyl said... | Sunday, December 20, 2009 4:05:00 AM
ပါးစပ်ကြီး တချက်ထဲ ပိတ်သွားတာပဲ .... :D
မြစ်ကျိုးအင်း said... | Sunday, December 20, 2009 4:10:00 AM
ပုံကြည့်လိုက် စာဖတ်လိုက် ရယ်လိုက်နဲ့
ခုတလော အင်တာနက်တွေ ရှော့ရှိနေတယ် ထင်တယ်။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း said... | Sunday, December 20, 2009 5:39:00 AM
ဝက်ဝံလေး said... | Sunday, December 20, 2009 6:40:00 AM
ခရစ်စမတ် မားမားအိမ်ပြန်မလို့မလား သိသားပဲ ဟွန့်
မကိရေ တာ့တာနော် သိလား ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခရီးလေးဖြစ်ပါစေနော်
Merry Xmas and Happy New Year my dear ki
~ဏီလင်းညို~ said... | Sunday, December 20, 2009 6:49:00 AM
Anonymous said... | Sunday, December 20, 2009 8:21:00 AM
Nge Naing said... | Sunday, December 20, 2009 9:47:00 AM
လူဘယ်နှစ်ယောက်စာ တနေ့တာအလုပ်လဲ မသိဘူး။ Kiki တနေ့တာအလုပ်ကလည်း များလိုက်တာနော့်။ ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ATN said... | Sunday, December 20, 2009 11:12:00 AM
ပထမဆုံး ပုံကိုတော့ လန်... အဲ... လန့်သွားတယ်...
ကမ္ဘာ့မြေပုံကို မထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာ တွေ့လိုက်ရလို့...း)
ahphyulay said... | Sunday, December 20, 2009 11:20:00 AM
တောင်ပေါ်သား said... | Sunday, December 20, 2009 11:35:00 AM
အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေး)
၂၀၁၀ မှာ တွေ့ကြတာပေါ့ တူတူကဲမယ် အဟေးဟေးး
May Thu Khine said... | Sunday, December 20, 2009 12:36:00 PM
ဟိ... မမကိရေ့ ပုံတွေကလန်ထွက်နေတာပဲ...
Waing said... | Sunday, December 20, 2009 2:27:00 PM
မကိရေ ပုံတွေကို ရှာရှာဖွေဖွေ စုဆောင်းပေးထားတာ စာသားတွေနဲ့ ကွက်တိပဲ ရီလိုက်ရတာ အူတောင်နာတယ်း) စက်ဘီးပုံနဲ့ အလေးမနေတဲ့ပုံတွေကို အကြိုက်ဆုံးပဲ
ပိုးဟပ်လေး said... | Sunday, December 20, 2009 2:27:00 PM
ကြွက်သား ဟမ်ဘာဂါ ပူပူလေးရမယ်နော်........:P
မြတ်နိုး said... | Sunday, December 20, 2009 6:56:00 PM
သြော်..ဖွားကိ.. ပုံနဲ့စာနဲ့ ရေလည်မိုက်တယ်..။
မငုံ said... | Sunday, December 20, 2009 7:46:00 PM
သြော်..ဘွားတစ်ယောက် မိုးလင်းကတည်းက အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာ ..မိုက်တယ်။ ပုံနဲ့စာတွေ တွဲတင်တာ..ဘွား ဘယ်သွားနေတာလဲ။။ပြန်လာရင် မုန့်ဝယ်လာနော်. နေကောင်းအောင် ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ စောစောအိပ်ပါ။ မြေးစကားကို နားထောင်ရတယ်တဲ့။ :))
WWKM said... | Sunday, December 20, 2009 8:21:00 PM
လာပြီးပြုံးသွားပါတယ် ကိကိ ရေ.း)))
သုခုမလေဒီ said... | Monday, December 21, 2009 1:16:00 AM
အမယ် ပိုစ့်ကတင်နိုင်သေးတယ်။ လူကဖြင့်အလည်လွန်နေပြီးတော့များ။ အံ့ပါ့ ဖွားကိရေ.. အံ့ပါ့။ ပေါက်တကရကတော့ အလွန်ရေးတယ်။းP
ရေတမာ said... | Monday, December 21, 2009 8:03:00 AM
၀ါးးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ပိုစ့်ရော ကွန်မန့်တွေရော ရီရတယ်။ ဘွားကိ လူနောက်
ခြေလှမ်းသစ် said... | Monday, December 21, 2009 11:46:00 AM
ဖွားကိရေ ပုံတွေနဲ့ စာတွေ ဖတ်ရင်း ရီရတာ တမော ... တနေ့တာ ကလည်း မနည်းနော် ....
နွေးနေခြည် said... | Monday, December 21, 2009 4:03:00 PM
ဟားဟား အိုင်ဒီယာလေး ကောင်းလိုက်တာ.. ရီနေရတယ်း))))
အိမ်သာနတ်ကြီး နဲ့ ထိတွေ့ ဖို့အခြေအနေ မပေးတဲ့နေရာ ဆိုတော့ မြန်မာပြည် အလည်ပြန်တာဖြစ်မယ်။
သက်ဝေ said... | Wednesday, December 23, 2009 8:57:00 PM
တော်တော်လေးကို ရှာရှာဖွေဖွေ စုစုဆောင်းဆောင်းနဲ့ နောက်တာပဲ...
ကာရံမဲ့ said... | Sunday, January 03, 2010 10:03:00 PM
တစ်နေ့တာ အဖြစ်လေးကို တင်ပြသွားပုံလေးက အဆန်းသား... အတုယူစရာပါပဲ....
Anonymous said... | Saturday, January 30, 2010 2:10:00 PM
ကောင်းလိုက်တဲ့ စိတ်ကူး ..... ကိကိ ရေးသမျှ ထဲ ဒီပို့စ် ကို သဘော အကျဆုံး ရယ် ပါ ....
တချို့  ပုံတွေက တော်တော် ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ .....